एनएमए बचाउनका लागि मेरो उम्मेद्वारी : जिम्बा जाङबु शेर्पा - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
एनएमए बचाउनका लागि मेरो उम्मेद्वारी : जिम्बा जाङबु शेर्पा
२०७४ साउन ११ बुधवार
यही साउन २१ गते हुने नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) को २७ औं साधारण सभाले संघमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । निर्वाचन र साधारण सभा मिति नजिकिएसँगै अध्यक्ष लगायतका अन्य पदका लागि उम्मेद्वारी घोषणा गर्ने क्रम समेत बढेको छ । यसअघि पनि अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका जिम्बा जाङबु शेर्पाले पुन अध्यक्षमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले क्रमशः सन्तबीर लामा र निमी शेर्पालाई अध्यक्षको उम्मेद्वारको रुपमा अघि सारिसकेको छ । यो अवस्थामा पूर्वअध्यक्ष जिम्वाजाङबु शेपा किन निर्वाचनमा होमिदै छन् ? उनका एजेण्डा के–के हुन् यी र यस्तै विषयमा उहाँसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंले पुन एनएमएको अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला छ, के यो सत्य हो ?
जे सुन्न भो, त्यो सत्य हो । मैले पहिलेदेखि नै नेपाल पर्वतारोहण संघको अध्यक्षको दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै आएको छु ।
दोहोर्याएर अध्यक्ष बन्न चाहनुको कारण के हो ?
तपाईंलाई जानकारी होला । नेपाल पर्वतारोहण संघको अस्तित्व जोगाउनको लागि सर्वोच्च अदालतमा विगतमा २ वर्षसम्म मुद्दा–मामिलामा बिताई । पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘फेरि निर्वाचन गरि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नु’ भन्ने आदेश दिएपछि नयाँ निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनबाट म अध्यक्षमा निर्वाचित भए । यसरी विवादै विवादकाबीच असन्तुलित ढंगबाट निर्वाचित भई आएको हुदाँ मैले सो कार्यकालमा सोचे अनुरुप काम गर्न पाइन् ।
तैपनि सबै असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्दै मैले ३० बर्षपछि नेपालमा यूआइएएको साधारणसभा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरें । हालका अध्यक्षलाई एसियाबाट नेपाललाई यूआइएएको हनोररी मेम्बर बनाउन सफल भए । यद्यपी त्यो बेलाका अधुँरा कामहरु पुरा गर्ने मेरो धोको छ ।
दोस्रो कुरा अहिले बजारमा अध्यक्षको रुपमा ज–जसको नाम आइरहेको छ । उनीहरुबाट एमएमएको बचाउ होला जस्तो मलाई लाग्दैन । उनीहरु विगतदेखि नै कसरी हुन्छ, एनएमएलाई सिध्याउने भनेर लागेका व्यक्ति र पार्टीबाट सञ्चालित छन् । अबको निर्वाचन भनेको पिक खोस्न चाहने र पिक बचाउने समूहबीचको लडाई हो भन्ने मेरो बुझाई छ । त्यसकारण एनएमए बचाउनका लागि म पुन उम्मेद्वार बनेको हुँ ।
एमाले र माओवादी केन्द्र समर्थित व्यवसायीहरुले उम्मेद्वार सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ । तपाई चाहिँ कस्तो उम्मेद्वार ?
म स्वतन्त्र पर्यटन व्यवसायी हुँ । म ४० वर्षदेखि नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा क्रियाशिल छु । त्यसकारण मलाई यो पार्टी, उ पार्टी भन्दा पनि विशुद्व व्यवसायी र एनएमए बचाउन अभियानमा लागेकाहरुको साथ रहन्छ । त्यसले गर्दा म उहाँहरुको उम्मेद्वार हो । संघको उद्देश्य र पर्वतारोहणको महत्व वुझ्ने, संघको हकहितको लागि लड्ने विशुद्व पर्वतीय पर्यटन व्यवसायमा लागेका, विवादरहित व्यक्तिलाई संघको अध्यक्षमा निर्वाचित गरिदिनहुन म सबैमा हार्दिक अपिल पनि गर्दछु ।
तपाई कांग्रेस समर्थित व्यवसायीको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्दै हुुनुहुन्छ भन्ने चर्चा छ ?
उनीहरुले मलाई अध्यक्षको उम्मेद्वार बनाउँछन् भने त्यो झन राम्रो । एमालेका व्यवसायीहरुलाई पनि मैले जित्ने मान्छेलाई सहयोग गर्नुस् भनेको हो । तर उहाँहरुले मलाई लिनुभएन । फ्याँकिदिनु भो । अब कांग्रेस समर्थित व्यवसायीहरुले पनि आजसम्म मलाई छान्नुभएको छैन् । तर पनि मलाई विश्वास छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै पार्टीमा आबद्ध व्यवसायी जो एमएमलाई माया गर्छन् । नेपालको पर्वतीय पर्यटनको विकासमा रातदिन लागेका छन् उनीहरुको मलाई सहयोग रहन्छ ।
सहमतिय नेतृत्वका लागि तपाई छोड्न पनि तयार हुनुहुन्छ ?
अँ…….ह , त्यो सम्भव छैन् । सहमति भए मेरै नेतृत्वमा हुनुपर्छ । पर्वतीय पर्यटनलाई कोही व्यक्ति वा समूहलाई प्रयोग गरि पर्वतीय पर्यटनलाई ध्वस्त पारी एकलौटी कब्जा गर्न खोज्ने तत्वहरुलाई परास्त गर्नु अहिलको आवश्यकता हो ।
तपाईं उसो भए पछि नहट्ने ?
कुनै पनि हालतमा पछि हट्दिन् । मैले अघि पनि भने यो पिक खोस्ने र पिक बनाउने बिचको लडाईं हो । अहिलेका उम्मेद्वारहरु एनएमएको पिक खोस्नुपर्छ भन्ने पक्षबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ । संघको गरिमा र देशकै नमूना पर्वतारोहण व्यवसायलाई आफु खुसी बनाए, धमिल्याउन खोज्नेहरुलाई बेलैमा खबरदारी गर्नू हामी सबै पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीको कर्तव्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल पर्वतारोहण संघको छवि उच्च रहेको छ । त्यो छविलाई जोगाउन मात्रै होइन पर्वतारोहणमा नयाँ आयाम थप्न जरुरत छ । त्यसका लागि मेरो नेतृत्व जरुरी छ ।